Chaja isina waya, Inokurumidza Chaja YeApple - Lantaisi
Iyo isina waya charger inogona kuchaja nharembozha muhofisi pasina kudikanwa kwetambo zvakare.
Unogona kuchaja nharembozha yako kumba uye kubvisa dambudziko rematare akawandisa.
Paunenge uchityaira, inogona kuchaja foni zvisina waya, kuitira kuti mutyairi arege kutsauswa uye akachengeteka zvakanyanya.
Shenzhen LANTAISI Technology Co., Ltd rakaumbwa muna 2016, kunyanya chinotarisa R & D uye kugadzirwa Wireless mundiro zvigadzirwa. Chiono chedu kuve chekutanga-kirasi "Akangwara Kugadzira" mumunda we mobile mobile magetsi magetsi cheni. Iwo matekinoroji, ane makore gumi neshanu kusvika makumi maviri ane ruzivo mukugadzirwa kwekugadzirwa, tekinoroji shanduko yechirongwa uye kuziva-mumunda wekuchaja usina waya, anobva kuFoxconn, Huawei nemamwe makambani ane mukurumbira. Mushure memakore kukurumidza kukurumidza, bhizinesi redu rakapindirwa mukati mainland China, Hong Kong, Japan, South Korea, Southeast Asia, Europe, iyo US neSouth America. Yedu hombe zvigadzirwa mhando ndeinotevera: Desktop, yakamira, mota yakaiswa, 2 mu1, 3 muna 1, multifunctional rinoumbwa uye munhu PCBA, nezvimwe
Yakarurama waya isina kuchaja Mira 10W - Bes ...
NDINOGONA KUTAURA FONI UYE KUTAURA PA S ...
NDINOGONA KUSHANDISA SIMBA YEMAHARA YEMAHARA MU ...
KUSVIRA KUSVIRA KWAKAIPA KWAKAIPA KWANGU BHUKU BHUKU ...
Ese mabhatiri anodzoreredzwa anotanga kudzikisira mushure meimwe huwandu hwechaji macircuit. Chaji yekuchaja ndiyo nhamba yenguva iyo bhatiri inoshandiswa kuyananisa, kunyangwe: kubhadhariswa zvakazara zvobva zvadhonzwa zvachose zvakati wandei zvobva zvadururwa neyakaenzana (eg kubhadhariswa kusvika ku50% zvobva zvadururwa ne50%) Kutengesa zvisina waya kwakashoropodzwa nekuwedzera iyo chiyero panowanikwa maitikiro echarge aya. Paunochaja foni yako netambo, tambo iri kumesa foni kwete bhatiri. Waya ...
NDIPI SIMPFONI DZINOFANIRA NEWIR ...
Aya anotevera mafoni ane Qi isina waya kuchaja yakavakirwa mu (yekupedzisira yakagadziriswa munaJune 2019): GADZIRA MUENZANISO Apple iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus BlackBerry Evolve X, Evolve, Priv, Q20, Z30 Google Pixel 3 XL , Pixel 3, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 Huawei P30 Pro, Mate 20 RS Porsche Dhizaini, Mate 20 X, Mate 20 Pro, P20 Pro, Mate RS Porsche Dhizaini LG G8 ThinQ, V35 ThinQ, G7 ThinQ, V30S ThinQ, V30, G6 + (US vhezheni chete), G6 (US vhezheni chete) Microsoft Lumia, ...